Kleva Nkeva - #COVID19SA LockDown Alert Levels Explained
25 April 2020 09:03
UMZANTSI AFRIKA WANDULA UKUDLULELA KWELINYE INQANABA KUMANYATHELO OKULWA LO BHUBHANE ICOVID-19 CORONAVIRUS.
uMongameli uCyril uthi ukusukela ngomhla we-1 Meyi 2020 uMzantsi Afrika uzokulihlisela inqanaba lokuvalwa kwesizwe. Ngokwelixesha isizwe sikwinqanaba lesihlanu(5), apho kuvalwa yonke into edibanisa abantu ukusukela kwimisebenzi, iicawa, imidlalo, iinkomfa, ukhenketho lwamazwe, kunye nokwasekuhlaleni. uMongamli uRamaphosa uthi isizathu soku sizonceda ukuthintela izivinini ekukhuleni kwamanani okusulelana kwabantu.
UMongameli usikhusele isigqibo sakhe sokunyanzela ukuvalwa kweenkqubo zesizwe, esithi oku kungqinwe ngokwenyani ukuba yayisisigqibo esifanelekileyo ngeloxesha, kwaye kuncede ekunciphiseni ukuqhubela phambili kwale COVID-19 Coronavirus. Umongameli uRamaphosa uqhubeke esithi bekufanele kwenziwe oku ukuthintela imeko apho amaziko ethu ezempilo eza kuthi asokole kanobomi ukwamnkela wonke ubani wase Mzantsi Afrika ofuna uncedo kwezonyango.
Kwelinye icala uMongameli uyavumelana nabo bachaphazeleke kakubi ekuvalweni kwesizwe, esithi abantu kufuneka batye, iinkampani kufuneka zirhwebelane ukuze zikwazi ukugcina abasebenzi befumana umvuzo.
Ngale nto, uMongameli uthi ngolwesine weveki ezayo, imigaqo yokuvalwa kwesizwe iya kuhlaziywa ngokweenjongo zokuthi kukhululwe amashishini, nabasebenzi abathile bazokwazi ukubuyela ngokuthe ngcembe kwimisebenzi ethile yezoqoqosho. Oku kuyakuphunyezwa ngohlobo lweziCwangciso zokukhusela abantu kubungcipheko bokusulelana ngesi sifo.
Umongameli Ramaphosa uthi ezi zicwangciso ziza kuvumela urhulumente ukuba aqhubeke nokufunda amanyathelo afanelekileyo okuphelisa ukusasazeka kwale ntsholongwane lonto izonceda urhulumente ukuba angabeki abantu ebungciphekweni ngelixa evumela imisebenzi ethile yezoqoqosho ukuba iqhubeke kwakhona.
Ukufezekisa ukuvulwa okulinganayo kweminye imisebenzi yezoqoqosho, uMongameli wathi ngoncedo lweKhansile yeCoronavirus Command, baseke indlela emiselweyo yokuthatha amanyathelo abanzi ukuqinisekisa ulumkiso olugqithisileyo nokubaluleka kwako oku.
Esi sicwangciso siza kubandakanya amanqanaba ama-5 amanyathelo okunciphisa eCoronavirus.
Inqanaba lesi-5: Ukuphunyezwa kwamanyathelo aluqilimba ukunceda nokukhusela ubungcipheko bokulahleka kobomi.
Inqanaba lesi-4: Ukuphunyezwa kwamanyathelo okhuseleko ukuze kuncitshiswe ukusulelana koluntu, ngelixa ivumela imisebenzi ethile ukuba iqale urhwebo kwakhona.
Inqanaba lesi-3: Ukumisela ezinye izithintelo kwabo babuyela emsebenzini. Esinye sezizithintelo sithi osomashishini banyanzeleka ukuba ukubuya benze amalungiselelo afanelekileyo okhuseleko abasebenzi kumaziko abo okusebenza. Linani elithile elizokuvumeleka ukuba libuye emsenzini okwelixeshana.
Inqanaba lesi-2: Ivumela ukuqhubeka ngakumbi kwezithintelo kodwa kugcinwe amanyathelo athile anjengokunqumla iindibano ekuhlaleni kunye nokuthintela ukonwaba kunye nezinye izinto zentlalo ukuze kuthintelwe ukuphinda kubuye kwesi sifo.
Inqanaba loku-1: Uninzi lwezinto eziza kwenziwa ziya kuvunyelwa ukuba zibuyele zikhatshwa ngamanyathelo okhuseleko aluqilimba, njengolwazi lwezempilo kunye nendlela yokuzikhusela ngalo lonke ixesha.
Ukuqinisekisa ukusebenza okuthe tye ekuzinziseni izithintelo, uMongameli Ramaphosa ucacisile ukuba kuzakubakho inqanaba lesizwe elisekwe kwinkangeleko yelizwe liphela. Ukuqinisekisa indlela echanekileyo nethe ngqo yokuphendula lo bhubhani, umongameli waphinda wathi amaphondo, izithili kunye ne-metros ziya kugwetywa ngokukodwa ngokubhekisele kwimfaneleko.
Umongameli uRamaphosa uthi ibhunga likawonke-wonke leCoronavirus liya kumisela inqanaba elisekwe kuvavanyo lweqondo losuleleko kunye nenqanaba lenkqubo yethu yezempilo ukubonelela abo bafuna uncedo.
Abaphathiswa abakhokhela amasebe namacandelo karhulumente baya kuchaza ngokweenkcukacha amanyathelo okuhlela aza kusetyenziswa ukumisela amanqanaba okuncitshiswa kwezithintelo.
Oosomashishini baya bongozwa ukuba bavumele abasebenzi babo ukuba basebenzele emakhaya kangangoko kwabo bakwaziyo ukwenza njalo. Kuya kufuneka abaqeshi bahambisane nemigqaqo yokhuseleko ngaphambi kokuvumela inani elithile ukuba libuye kumacandelo omsebenzi.
Ukuvulwa ngokutsha kwesigaba sezikolo kunye namanye amaziko emfundo ephezulu kuza kugqitywa ngabaphathiswa abafanelekileyo balamacandelo.
Uninzi lwamanyathelo aphantsi kwenqanaba 4 lobuchule liya kuhlala lisendaweni. amanye ala manyathelo abandakanya.
Ukuvalwa kwemida ngaphandle kokubuyiselwa kwabemi boMzantsi Afrika, nabemi bamanye amazwe.
Akukho khenketho lwamaphondo oluvumelekileyo ngaphandle kwezothutho lweempahla ezibalulekileyo, kunye neemeko ezizodwa ezinje ngemingcwabo.
Izithintelo kumthetho wezithuthi zikawonke wonke kunye neemfuno ezingqongqo zokucoca. Oku kuyakufuna ukuba bonke abakhweli banxibe imaski yobuso ngalo lonke ixesha kwaye abaqhubi bangazigcwalisi izithuthi zabo.
Abantu bayakhuthazeka ukuba bahlale ekhaya ngaphandle kwenjongo yokufumana iimfaneleko ezibalulekileyo kunye nokuya emsebenzini.
Ukuqhubeka kwesibhengezo kuzo zonke iindibano zikawonke-wonke ngaphandle kwemingcwabo nomsebenzi.
Ukuthengiswa kwecuba kuzokuvunyelwa ukusukela nge-1 kuMeyi 2020.
Ukuthengiswa kotywala akuvumelekanga lonto ithi amashishini otywala azokuhlala evaliwe.
Amakhonsathi, imicimbi yezemidlalo, iindibano zeecawe neminye iminyhadala yezoluntu iya kuhlala ingavunyelwa de ibe ibonwa ikhuselekile.
Abantu bayalumkiswa ukuba bahlale bephephile kwaye banoxanduva lokunceda isizwe ukuba silwe ulo ntshaba olungenakoyiswa. Abemi boMzantsi Afrika bayabongozwa ukuba banxibe imaski yobuso ngalo lonke ixesha ukwandisa ukhuseleko lwabo kunye nolwabanye.
Umongameli Ramaphosa uthe impendulo yezempilo kuluntu inyuke kakhulu kwaye bazakuqhubeka besenza njenga ngoko ukuthintela abemi beli, ingakumbi abo bakwiindawo ezibucala. Imali eyongezelelweyo eyi-R20bn iya kwabelwa iqela lempendulo kwezempilo ukuba lifumane izixhobo ezifana neebhedi, amayeza, izixhobo zokusebenza, nabasebenzi abakwididi elifanelekileyo.
3 Arrested in PSJ
The people have been arrested so far in PSJ.
SA Lock Down until 16 April 2020
We are going into a lock down. What did the President say?
Corona Virus TIPS - AMANQAKU
Yazi Nge Corona Virus ungathandabuzi!
Amakhehlekazi akaziyekeli emampondweni
Funda ngoovuka uzenzele, isakhona siyafundelwa uzenzele imali, musa ukulinda unxele!